Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland oo ka qeybgalay kulanka baarlamaanka Nigeria | Baligubadlemedia.com
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland oo ka qeybgalay kulanka baarlamaanka Nigeria
Waftiga uu hor kacayo guddoomiyaha Baaarlamaanka Puntland ee ku sugan dalka Nigeria ayaa kulamo muhim ah kula yeeshay xarunta Baarlamaanka dalkaasi xubno ka kooban labada gole ee Baarlamaanka dalkaasi Nigeria ee magaceeda loosoo gaabiyo NASS (National Assembly) iyo Aqalka Sare (The Senate).
Ujeedada kulamadaan dhexmaray Baarlamaanka Puntland iyo Baarlamaanka Nigeria ayaa ahaa aqoon is weydaarsi maadaama labada waddan ee Soomaaliya iyo Nigeria ay yihiin labo waddan oo ku shaqeeya hannaanka Federaalismka.
Xog-hayaha guud ee Baarlamaanka Nigeria ayaa guddoomiyaha Golaha Wakiillada Puntland uga warbixiyey sida ay u wada shaqeeyaan Baarlamaanka Qaranka Nigeria iyo Baarlamaanada maamullada gobollada dalkaasi, taas oo Puntland ay doonayso inay khibrad iyo waayo aragnimo xeeldheer ka dhaxasho.
Waftiga Puntland ayaa ka qayb galay kulanka Aqalka sare ee dalkaasi oo ay ka socotey dood adag oo ku saabsan Miisaaniyadda dalkaasi ayaa guddoomiyaha aqalka sare waxa uu madasha shirka kaga dhawaaqay in ay kulanka Baarlamaanka kasoo qayb galay waftiga ka socda Baarlamaanka Puntland ee Soomaaliyeed si loogu istaago loona soo dhoweeyo.
Sidoo kale waftiga Baarlamaanka Puntland ayaa waxay ka qayb galeen kulankii caadiga ahaa ee golaha shacabka dalkaasi oo isagana ay ka socotey dood ku saabsan hannaanka horumarinta waddoonyinka iyo garoomada dalkaasi, iyadoo isla markiiba kulanka hakad loo geliyey si loosoo dhoweeyey Waftiga Puntland.